Shirka Golaha Wasiirrada |
Maxaad Ka ogtahy Awoodi Cusmaaniyiinta Qaybtii 2aad! ITuke Somalism.com
Kalsoonida Naftaada Waa Guusha Ganacsigaada |Tukesomalism.com
Maxaad Ka Taqanaa Horumarka Maamul Goboleedka Puntland? |Tukesomalism.com
Cabdijabaar Sh. Axmed, June 20, 2016
Ma Jiri karo Xildhibaan Qooto Qooto |Tukesomalism.com
Shirka golaha wasiirradu wuxuu ka mid yahay hababka shaqo iyo go’aan qaadasho ee xukuumadaha. Mar shaqada loo qabto go’aannadana loo qaato keli keli iyo mar shaqada loo qabto isku duubni go’aannadana loo qaato isku duubni. Sidoo kale mar waa amaawiir xagga sare ka timaadda oo hannaan jaranjaro la isugu gudbiyo, marmarka qaarkoodna waa dood dimuquraaddi ah oo golaha wasiirrada la isku waydaarsado iyada oo mararka qaarkood aan la isu hamranayn, waxna la isu hambaynayn, haddana waxay leedahay hannaan iyo habraac.
Xukuumaddii aan ka mid ahaa waxay golaha wasiirradu shiri jireen maalinta Khamiista, 9:00 ilaa 12:00 maalinnimo. Sida caadiga ah waxaa hoggaamin jiray madaxweynaha, haddii uu maqan yahayna madaxweyne ku xigeenka. Wuxuu lahaa habraac ama buugyare aannu samaynay oo goluhu ansixiyey intii xukuumaddu joogtay. Waxaa doodihiisa ka qayb qaadan jiray wasiirrada, wasiiru-dawlayaasha iyo wasiir-xigeennada, iyadoo ay u qaybsanaayeen guddiyo shaqo iyo guddiyo hawleedyo marka loo baahdo la magacaabo. Waxaa ka qayb qaata farsamayaqaanno, sharciyaqaanno markii loo baahdo iyo afhayeenka madaxweynaha.
Goluhu wuxuu wadaagi jiray, kana doodi jiray xeerar uu curiyey, siyaasad uu dejiyey, miisaaniyad uu diyaariyay, qaddiyadaha guud ee qaranka soo food saara, xallinta mushkiladaha waaweyn iyo wixii madaxweynuhu uga maarmi waayo ee uu soo gudbiyo. Wasiirradu waxay xoghayaha golaha u soo gudbin jireen ajandaha 24 saacadood ka hor furitaanka shirka, wixii aan degdeg mudnaan gaar ah la siinayo ahayn (Emergency), madaxweynuhuna wuu ansixin jiray.
Waxaa dhici jirtay umuuro doodo adag foodda la isku daro, oo maalin iyo ka badanba qaata, ama in miisaaniyadda mar iyo lababa la ansixin waayo oo dib loo celiyo. Balse inta badan isu tanaasul iyo isfaham (consensus) ayaa wax lagu dhammayn jiray. Wasiirrada aan ku xasuusto farshaxannimada rayi-abuurka (contributions) waxaa ka mid ahaa saaxiibbaday Cabdi Aw Daahir (AHUN) iyo Cabdirisaaq Khaliif. Waxaa doodo kulul lahaan jiray Xuseen Axmed Caydiid iyo Dr Gaboose, iyada oo uu Oday Cadami erayo waayeelnimo iyo qosol isugu jira uu isugu joojin jiray mararka ay cakiranto.
Runtii wuxuu ahaa gole nadiif ah oo aad la isugu ixtiraamo. Maxsuulka ka soo baxa (Minutes) waxaa lagu dari jiray gal u gaar ah iyada oo fulinteeda iyo dabagalkeedana wasaaraddaydu u xilsaarnayd.
Wasiirka Madaxtooyadu wuxuu ahaa shaqo siyaasadeed, waxaa naga hor yimi caqabado badan. Waxaa ii qorshaysnaa in aan xaqiijiyo himalada ummaddayda, diyaarinta iyo hirgelinta aragtiyaha hoggaamiyihii aan la shaqaynayay. Waxaanay ii ahayd arrintani fursad aan wax badan ku ogaaday dad badanna kula kulmay. Iyada oo aan ku muujiyay kartidayda, hal-abuurkayga iyo heerka siyaasadeed ee aan ugu adeegi karo bulshadayda.
Tags: Shirka Golaha Wasiirrada
Next post Dedaallada Ictiraafraadinta Somaliland
Previous post Kulamo Madaxeed aan Qayb Ka Ahaa